कहिले खुल्ला तातोपानी नाका ? - Karobar National Economic Daily
कहिले खुल्ला तातोपानी नाका ?
query_builderMarch 30, 2017 2:02 PM supervisor_account किशोर बुढाथोकी visibility1929
नेपाल चीन सीमा रहेको मितेरी पुलमा लगाइएको तारबार । फाइल तस्बिरः किशोर बुढाथोकी-कारोबार
‘फ्रि तिब्बत’ गतिविधि हुन सक्ने आशंकाले चीनले देखाएन चासो
सिन्धुपाल्चोकः २३ महिनादेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका अझै खुल्न सकेको छैन । भूकम्पले क्षति पु¥याएको सडकलगायत अन्य पूर्वाधार पुनर्निर्माण भइसक्दा पनि नाका खुल्न सकेको छैन ।
अरनिको राजमार्ग र मितेरी पुलदेखि चीनको न्यालामसम्मको सडक साविककै अवस्थामा फर्कदाँसमेत चीनले चासो नदेखाएकै कारण नाका पुनः सूचारु हुन नसकेको हो ।
बन्द रहेको नाका खुलाउन नेपाल–चीनका उच्च अधिकारीहरुको सीमा सुुरक्षा बैठक पटक–पटक बसिसकेको छ । बैठकमा चीनका अधिकारीले सडकमा क्षति पुगेको कारण देखाउँदै आएका थिए । अहिले सडक निर्माण भइसक्दा पनि नाका सूचारु गराउनेबारे चीन मौन बस्नुले नाका खुल्नेमा अन्यौलता देखिन्छ ।
भूकम्पले चिरा पारेको सीमावर्ती क्षेत्र तातोपानीदेखि न्यालमको सडक पुनर्निर्माण सकिएको छ । अरनिको राजमार्गको बाह्रबिसेदेखि लिपिङसम्म र झाङ्मु पुलदेखि तिब्बतको न्यालमसम्म आवतजावत गर्ने सडक बन्दा पनि चीनले चासो नदेखाउनुमा अरू कुनै कारण हुनसक्ने अध्यागमन कार्यालय लिपिङका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार यो नाका सूचारु हुँदा ‘फ्रि तिब्बत’ गतिविधि हुन सक्ने आशंकाले पनि चीनले चासो नदेखाएको हो । भूकम्पले घर भत्काउँदा सीमा गाउँ लिपिङमा रहेका भग्न घरमा दलाई लामाको तस्बिर रहेको भेटिएकाले पनि चीन सरकारले यो नाकालाई प्राथमिकतामा नराखेको हुनसक्ने उनको भनाई छ ।
नाका सूचारु नहुँदा दैनिक डेढ करोडको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन गर्ने तातोपानी भन्सारमा प्रभाव परेको छ । अरनिको राजमार्गमासमेत दैनिक ३५ लाखभन्दा बढीको व्यापारिक कारोबार हुने गर्दथ्यो । मितेरी पुलमै रहेर व्यापार गर्ने झन्डै चार हजार व्यापरी विस्थापित भएको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कमलकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
चीन तातोपानी नाका फ्रि तिब्बत